Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT) · Janoary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT) · Janoary, 2013
Tantara mikasika ny Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT) tamin'ny Janoary, 2013
Matetika amin'ny alina no mivenjivenjy manao ny asany eny amin'ny sisin-dalan'ny tanan-dehiben'i San Juan, ireo mpikambana avy amin'ny vondrompiarahamonin'ireo 'trans' (olona nanova taovam-pananahana) ao amin'ny faritr'i Santurce avy any Porto Riko.“Ny fanjaitra”, fanadihadiana iray vaovao tarihin'ilay mpamokatra horonantsary iray avy eo an-toerana antsoina hoe Carmen Oquendo-Villar, izay tsy miompana loatra amin'ny zava-mitranga eny an-dalana; fa mifantoka kosa amin'ny endrika ambadiky ny sehatra dia ny hatsaran'ny asa hita eny an-dalana izay ametrahan'ireo mpiasan'ny sisin-dalana fitokisana.
Azia Afovoany sy Kaokazy 20 Janoary 2013
Amerika Avaratra 17 Janoary 2013
Nanonjanonja tao amin'ny Twitter nandritra ny andron'ny Sabotsy 22 Desambra ny tenifototra #SiMonFilsEstGay. Fandrisihana ny olona hankahala ireo olona mitovy nefa mifanambady, mody ampiarahana amin'ny hanihany diso toerana izay ny tena fototra dia ny hanomezana izay heverina ho sazy sahaza ny zanaka lahy raha toa izy ka mpitia lehilahy toa azy.
Afrika Mainty 15 Janoary 2013
Nisarika ny sain'izao tontolo izao i Oganda tamin'ny 2009 rehefa nanolotra ilay vvolavolan-dalàna " Kill the Gays" na "Vonoy ny Gay") manameloka ny fiarahan'ireo mitovy taovam-pananahana (homosexuel) ny mpikambana iray ao amin'ny parlemanta, ary vao haingana ihany koa ,tamin'ny fiandohan'ity taona ity, rehefa nisy namono i David Kato, LGBT mpikatroka mafàna fo. Nefa tsy nahasakana ny LGBT tany Oganda tsy hanatontosa ilay Gay Pride voalohany tao amin'ny fireneny natao tany Entebbe izany tamin'ny fiandohan'ity volana ity.
Oganda Tamin'ny 2012: 50 Nahaleovan-tena Sy Solombavambahoaka Tanora Indrindra Ho An'i Afrika
Afrika Mainty 05 Janoary 2013
Iray amin'ireo taom-pahasambarana teo amin'ny tantaran'i Oganda ny 2012. Fahatsiarovana mamy miainga avy any amin'ny nahalanian'ilay mpikambana tanora indrindra ao amin'ny Parlemantam-Pirenena tamin'ny fankalazana ny faha-50 taona nahaleovan'ny firenena tena.